साउदीमा अलपत्र नेपालीको चित्कार : तत्काल उद्धार नभए आत्महत्या गर्छौं – Sky News Nepal
केहीले ऋण गरेर फर्कने टिकट लिए । उनलाई ऋण दिने पनि कोही छैनन् । घरबाट खर्च पठाउने स्थिति पनि छैन ।
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार १४:४३ मा प्रकाशित
महोत्तरीका नरेन्द्र सर्वरिया कार्यरत साउदीस्थित कम्पनी बन्द भएको ६ महिना भयो । तीन वर्षअघि रोजगारीका लागि साउदी पुगेका नरेन्द्र कम्पनी बन्द भएदेखि आधा पेट खाएर प्राण धानिरहेका छन् । उनको साथमा एक रुपैयाँ पनि छैन । कम्पनीले निकालेको दिन कहाँ जाने ? के खाने ? कुनै टुंगो छैन । नेपाल फर्कन सक्ने स्थिति पनि छैन । सरकारले उद्धार गरिदिन्छ कि भन्ने आस त छ तर विश्वास छैन । नरेन्द्र भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले तत्काल उद्धार नगरे आत्महत्या गर्नुको विकल्प छैन ।’नरेन्द्र मात्रै होइनन्, उनीसँगै कम्पनीमा काम गर्ने १५ जना नेपाली कामविहीन भएका छन् । उनीहरूको स्थिति दयनीय छ । नरेन्द्रसँगै बसेका केही साथीले ऋण गरेर घर फर्कने टिकट लिएका छन् । तर, उनलाई ऋण दिने पनि कोही छैनन् । घरबाट टिकट खर्च पठाउने स्थिति पनि छैन ।
अल हैदर कम्पनीमा काम गर्ने ११ श्रमिकले ६ महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । उनीहरूसँग घर फर्कनका लागि पैसा पनि छैन । ‘कम्पनीले पारिश्रमिक नदिँदा, सरकार र दूतावासले समेत सहयोग नगर्दा झुन्डिएर मर्ने अवस्थामा पुगेका छौं,’ झापाका राजु मुर्मु भन्छन्, ‘अब धेरै दिन भोकभोकै बस्न सकिने अवस्था छैन ।’ ६ महिनामा रोजगारदाता कम्पनीले घर फर्किनका लागि एकपटक आठ सय रियाल मात्रै दिएको थियो । त्यो पनि सकिएपछि बेखर्ची भएको मुर्मु सुनाउँछन् । घर फर्कन सरकारले साउदी–काठमाडौं हवाई भाडा १ हजार ३ सय ४ रियाल तोकेको छ । जेद्दामै बेखर्ची मोरङका महेन्द्र हेमरमसँग पनि हवाई भाडा तिर्न पैसा छैन । घरबाट हवाई भाडा मगाउने अवस्था पनि नभएको उनी गुनासो गर्छन् । ६ महिनादेखि कामविहीन उनीहरू अहिलेसम्म कम्पनीले दिएको कोठामा बस्दै आए पनि जुनसुकै बेला निकालिन सक्ने बताउँछन् । नवलपरासीका नरेन्द्र चौधरीको कथा पनि उस्तै छ । घर फर्कन पैसा नभएकाले फर्काइदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका श्रमिक समस्यामा परेका छन् । सरकारी अधिकारीसँग विदेशमा रोजगारी गुमाएका र समस्यामा परेका नेपालीको यकिन तथ्यांकसमेत छैन । कतिलाई उद्धार गर्नुपर्ने हो भन्ने सूचना पनि छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकबाट घर फर्कन हालसम्म ९३ हजारले निवेदन दिएको जनाएको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी) का निर्देशक सोमप्रसाद लामिछाने सरकारले उद्धारमा तत्काल ध्यान नदिए श्रमिकको ज्यानै नै जाने अवस्था आउन सक्ने भएकाले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । ( नेपाली पब्लिक )